သင့်စိတ်နှလုံးသည် ဆူးတောမြေဖြစ်ပါသလော။| Is Your Heart Thorny Ground? | Real Conversion
မေလ ( ၁ ) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဟောကြားသော
“မတရားသောအမှုသည်များပြားသဖြင့်၊ အများသောသူတို့၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ခေါင်းပါးလိမ့်မည်။” ( မဿဲ ၂၄း ၁၂ ) )
ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်တွင် မှားယွင်းသောအရာများကို သိနားလည်ဖို့ ဤကျမ်းပိုဒ် သည် ဓမ္မသစ်ကျမ်း၏ အနှစ်ချုပ်ဖြစ်ပါသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်ကို နားမလည်လျှင် ပြဿနာကို လည်းကောင်း၊ ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းလမ်းများကိုလည်းကောင်း နားလည်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံး ထပ်ခါထပ်ခါရောက်ရှိသွားသည့် ကျမ်းပိုဒ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါသည်။ တစ်နှစ်ပြီး တစ်နှစ်၊ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုပြီးတစ်ခု သွားသည့် ကျမ်းပိုဒ်လည်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ဤ ကျမ်းပိုဒ်ကို ဘီလီဂရေဟမ်ထံက ဦးစွာ ကြားသိရသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ဆယ်ကျော်သက်အ ရွယ် တနင်္ဂနွေညနေပိုင်းတွင် ရေဒီယိုအစီအစဉ်ဖြင့် သူတရားဟောသည်ကို နားထောင်ရပါ သည်။ မစ္စတာဂရေဟမ်သည် လောက၏အဆုံးနိမိတ်လက္ခဏာအကြောင်းတရားဟောသည့် အခါ ဤကျမ်းပိုဒ်ကို ကိုးကားဟောကြားခဲ့သည်။ သူ၏နောက်ဆုံးစာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်မှာ တောက်လောနေသောကမ္ဘာကြီး ဖြစ်သည်။ ( နှစ်ရက်၊ ၁၉၆၅ ) ဘီလီဂရေဟမ်က အောက်ပါ အတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။
ယေရှုက “မတရားသောအမှုသည် ပျံ့နှံ့နေသည်ဖြစ်၍၊ လူ တို့၏မေတ္တာသည် အေးစက်လျက်ရှိပါသည်။” (မဿဲ ၂၄း ၁၂၊ NEB) “နောက်ဆုံးသောကာလတွင် ဘေးသင့်သောအချိန်ကာ လသည် ရောက်လာလိမ့်မည်။ လူတို့သည် မိမိကိုယ်ကို ချစ်ကြ လိမ့်မည်။ဘုရားသခင်ထက် ပျော်ရွှင်မှု၊ တပ်မက်သောစိတ်သာ များလာမည်။ ဘုရားတရားပုံစံရှိနေမည့်အစား၊ တန်ခိုးတော်ကို ငြင်းဆန်ကြသည်။ ထိုသို့ပင် အဝေးသို့ထွက်ပြေးကြပါသည်။” (၂ တိ ၃း ၁- ၅ ) လူများစွာတို့သည် အသင်းတော်၌ ခရစ်တော်နှင့် ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံမှုမရှိသည့်အချိန်တွင် လူများစွာကြား၌ မှား ယွင်းသောအယူဝါဒများပြန့်နှံ့လာသောအချိန်ကို ရည်ညွှန်းဆိုထား ဟန်ရှိပါသည်။ မှားယွင်းသောဆရာများသည် အသင်းတော်ထဲ၌ တဖြည်းဖြည့်စိမ့်ဝင်လာကြသည်။ သူတို့သည် ခေတ်ကာလအဆုံး ပိုင်း၌ အသင်းတော်၏ သွင်ပြင်ကိုထင်ရှားစေသည့် ‘လဲကျသူတို့’ ၏ခေါင်းဆောင်များသာဖြစ်ကြပါသည်။ (ဘီလီဂရေဟမ်၊ D. D., World Aflame, Doubleday and Company, ၁၉၆၅၊ စာ- ၂၂၀၊ ၂၂၁၊ ၂၁၉)
နောက်ပိုင်းတွင် မစ္စတာဂရေဟမ်က ဒေါက်တာ အမ်၊ အာ၊ ဒယ်ဟမ်၏သားဆီသို့ပို့ဆောင် သောစာကို ဖတ်ရှုရပါသည်။ ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင် ကားမတော်တဆမှုကြောင့် ဒေါက်တာ DeHaan သေဆုံးသွားသောအခါ မစ္စတာ ဂရေဟမ်က ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွင် ဒေါက်တာ DeHaan ကို နားထောင်ရသောကြောင့် များစွာသောအတွေးအခေါ်များရရှိထားကြောင်း ဆိုခဲ့ ပါသည်။ အချိန်ကာလ၏နိမိတ်လက္ခဏာများ ဟူသော ၎င်း၏စာအုပ်ထဲတွင် ဒေါက်တာ DeHaan က ဤသို့ဆိုသည်။
မှားယွင်းမှုနှင့်တူညီမှုများသည် ဖော်ပြထားသည့် နောက်ထပ်အ ပြစ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ “မတရားသောအမှုသည်များပြားသဖြင့် အများ သောသူတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ခေါင်းပါးလိမ့်မည်။” (မဿဲ ၂၄း ၁၂ ) လူ့သမိုင်းကနဦးကာလတွင် ယနေ့အချိန်ကာလကဲ့သို့ လုံးဝမရှိဖူးပါ။ ရာစုအနည်းငယ်တွင် သန့်ရှင်းသောသူတို့၏ ရိုးရှင်း သောယုံကြည်ခြင်းထဲက ကျော်ထွက်သွားကြပါသည်။ “လူများစွာ တို့၏မေတ္တာသည် ခေါင်းပါးသည်မှာ” ယနေ့ခရစ်ယာန်အသိုင်းအ ဝိုင်းကြားတွင် အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါသည်။ လူများစွာ တို့၏မေတ္တာသည် ခေါင်းပါးလိမ့်မည်။ (M.R. DeHaan, M.D., အချိန်ကာလ၏နိမိတ်၊, Zondervan Publishing House, ၁၉၅၁၊ စာ- ၅၈ )
ဘီလီဂရေဟမ်နှင့် ဒေါက်တာ DeHaan တို့ပြောဆိုသည်ကို နားထောင်သည့် အချိန် တိုင်းတွင် မဿဲ ၂၄း ၁၂ ကို အမြဲတမ်း ဆင်ခြင်မိသည်။ ထိုစကားများသည် တပည့်တော်များ ၏စကားကိုဖြေဆိုသည့် ယေရှု၏စကားပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုစကားမှာ “ပြန်လာမည့်အချိန်နှင့် ဆိုင်သောနိမိတ်နှင့်နောက်ဆုံးသောကာလ၏နိမိတ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။”ထိုမေးခွန်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီယေရှုဖြေကြားချက်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောကျမ်းပိုဒ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
“မတရားသောအမှုသည်များပြားသဖြင့်၊ အများသောသူတို့၏ ချစ် ခြင်းမေတ္တာသည် ခေါင်းပါးလိမ့်မည်။” ( (မဿဲ ၂၄း ၁၂ ) )
၁။	ပထမအချက်။ ဤအရာများဖြစ်လာမည်ဟု မည်သည့်အချိန်၌ ခရစ်တော် မိန့်တော်မူခဲ့သနည်း။
“သူပြန်လာသည့်အချိန်နှင့် ကမ္ဘာကြီး၏နောက်ဆုံးသောကာလ၏နိမိတ်အဖြစ်” ဖြစ် လာမည်အကြောင်း သူက မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ (မဿဲ ၂၄း ၃ ) ကျမ်းပိုဒ်ပေါင်းများစွာက နောက်ဆုံးသောကာလ၏အရိပ်နိမိတ်အကြောင်းကို မိန့်တော်မူသည်။ ဤစာမျက်နှာ (၁၀၃၃) ၏ အောက်ခြေတွင် Scofield မှတ်စုက ဤကျမ်းပိုဒ်ကို “နောက်ဆုံးသောကာလ၏တိကျသော နည်းလမ်းတွင် အသုံးချတော်မူကြောင်း၊ နောက်ဆုံးသောကာလ၏မတရားသောအမှုထဲသို့ စု ရုံးလျက်လာကြကြောင်း အရာအားလုံး၏ ထူးခြားသွင်ပြင်ကိုဖော်ပြထားသည်” ဟု မှန်ကန် စွာ ဖော်ပြထားပါသည်။ (Scofield Study Bible, ၁၉၁၇၊ စာ- ၁၀၃၃၊ မဿဲ ၂၄း ၃ မှတ်စု ) ၂ တိမောသေ ၃း ၁- ၁၃၊ ယုဒ ၄၊ ၁၉၊ ဗျာဒိတ် ၃း ၁၄- ၂၂ စသဖြင့် အခြားကျမ်းပိုဒ်ပေါင်းများစွာ ကို ရေတွက်နိူင်ပါသည်။
အသင်းတော်ဘယ်လောက်များများပြိုကျလဲသည်ကို သင်တို့လူငယ်များက သိကြ မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်ဘဝအသက်တာတွင် ထိုအရာများကို ကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့ပါသည်။ ဒေသ န္တာရအသင်းတော်၏နိူးထမှုကို ၁၉၆၉ တွင် ကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ကျယ်ပြန့်သောနယ်မြေ အတွင်း၌ နိူးထမှုကို ၁၉၇၁ တွင် ကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ အခြားဒေသန္တာရအသင်းတော်၏ နိူးထမှုကိုလည်း ၁၉၉၂ တွင် မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ အမေရိကန်ပြည်၊ အနောက် တိုင်းကမ္ဘာတွင် နိူးထမှု တစ်စုံတစ်ရာမကြားသိရတော့ပါ။ လုံးဝမကြားရပါ။ ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့ အသင်းတော်များ၌ မဿဲ ၂၄း ၁၂ အကြောင်း ဝမ်းနည်းစရာပုံရိပ်များကို ထပ်ခါထပ်ခါ မြင် တွေ့ကြရပါသည်။
“မတရားသောအမှုသည်များပြားသဖြင့်၊ အများသောသူတို့၏ ချစ် ခြင်းမေတ္တာသည် ခေါင်းပါးလိမ့်မည်။” ( မဿဲ ၂၄း ၁၂ ) )
ထိုအရာများမှာ နှစ်ခြင်းနှင့်အခြားဧဝံဂေလိအသင်းတော်များ၏ လက်ရှိအချိန်ကာလအခြေအ နေတစ်ရပ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သင်၏အကျဉ်းချုပ်ဘဝအသက်တာတွင် လေ့လာခဲ့ သို့မဟုတ် ကြားခဲ့ရသောလူများပါဝင်သည့်အသင်းတော်အမျိုးအစားများ၌သာဖြစ်သည်။ အတိတ်ကဖြစ် ပျက်ခဲ့သောနိူးထမှု၏သမိုင်းကြောင်းကို ဖတ်ရှုခြင်းမရှိလျှင် ယနေ့အသင်းတော်များ အဘယ် မျှလောက်ဆိုးသွင်းပြီး စိတ်ပျက်စရာကောင်းသည်ကို သိမည်မဟုတ်။ ပို၍ကောင်းသောအ သင်းတော်အကြောင်းပြောသည့်အချိန်တွင် စိတ်ပျက်စရာများကိုပြောသည်ဟု သင်ထင် ကောင်းထင်ပေမည်။ သင်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်ကာလတွင် မမြင်ဖူးကြ သို့မဟုတ် မ ကြားဖူးကြပေ။ ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်တွင် တရားလာရောက်ဟောကြားသော ဒေါက်တာ Kenneth Connolly က နိူးထမှု၊ အနောက်တိုင်းကမ္ဘာတွင် အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ်တွင်မျှ မတွေ့မြင်ခဲ့ကြဖူးသော မျိုးဆက်များကြားတွင် သင်တို့သည် အသက်ရှင်လျက်နေကြောင်း ဆို ထားသည်။
၂။	ဒုတိယအချက်။ ဤသို့ဖြစ်လာမည်အကြောင်း ယေရှုက အဘယ့်ကြောင့် မိန့်မူ ခဲ့သနည်း။
ကျမ်းပိုဒ်၏ ပထမစကားလုံးဖြစ်သော “နှင့်” ကို မှတ်သားထားပါ။ “မတရားသောအမှု သည်များပြားသဖြင့်၊ အများတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ခေါင်းပါးလိမ့်မည်။” အပိုဒ် ၁၀ မှ ၁၂ ကို မှတ်သားထားပါ။ “အများသော ….. ဖောက်ပြန်ခြင်းသို့ရောက်၍၊” (အပိုဒ် ၁၀ )၊ “အချင်းချင်း တယောက်ကိုတယောက်အပ်ကြလိမ့်မည်” (အပိုဒ် ၁၀ )၊ “အချင်းချင်း မုန်းကြ လိမ့်မည်။” (အပိုဒ် ၁၀)၊ “မိစ္ဆာပရောဖက်အများတို့သည် ပေါ်လာ၍၊” ( အပိုဒ် ၁၁ )၊“လူအများ တို့ကို လှည့်ဖြားကြလိမ့်မည်။” (အပိုဒ် ၁၁ )၊ “မတရားသောအမှုတို့သည် များပြားသဖြင့်” (အပိုဒ် ၁၂ ) တို့ဖြစ်သည်။ ဤအရာများထုတ်လုပ်သောအရာတို့သည် “နှင့်များ” ဖြင့် အဆုံး သတ်လေ့ရှိကြပါသည်။ “အများသောသူတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ခေါင်းပါးလိမ့်မည်” ကို သူတို့ သည် ထုတ်လုပ်လိမ့်မည်။ ထို “နှင့်များ” ၏ အဆုံးရလဒ်မှာ အများ (“အများဆုံး” NIV) သော သူတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ခေါင်းပါးရာနေရာဖြစ်သည့် အသင်းတော်များပင်ဖြစ်ပါသည်။ လှည့်ဖြားသော (“မှားယွင်းစွာဦးဆောင်သည့်” NASV) ၊ တို့နောက်သို့လိုက်ကြသဖြင့် အသင်း တော်များသည် ကွဲပြားသည်၊ တိုက်ခိုက်ကြကြောင်း အပိုဒ်ငယ် ၁၀ တွင်တွေ့ရသည်။ မတ ရားသောအမှု၏နောက်သို့လိုက်သည့်အသင်းတော်များတွင် အဂ္ဂပေမေတ္တာမရှိသည့်အသင်း တော်များကိုသာမွေးထုတ်ပေးပြီး ခရစ်ယာန်တို့၏မေတ္တာမရှိ။ ခရစ်တော်ကိုမချစ်။ ဘုရားသ ခင်ကိုလည်း မချစ်။ အသင်းတော်တွင်ရှိသောအခြားသောသူများကိုလည်း မချစ်ကြပေ။ သင် သည် ထိုနေရာများသို့ ရောက်သွားနိူင်သည်။ ထို “နှင့်များ” က “ဧဝံဂေလိအသင်းတော်များ၏ တိမ်ကောသွားခြင်း” အကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပြသထားပါသည်။ (ဒေါက်တာ Francis Schaeffer ၏ စာအုပ်ခေါင်းစဉ်ကို အသုံးပြုထားရန် ) နှစ်ခြင်းနှင့်ဧဝံဂေလိအသင်းတော်များ သည် အသင်းတော်များတိုက်ခိုက်နေကြခြင်းကြောင့် တိမ်ကောသွားကြသည်။ (အပိုဒ် ၁၀ )။ အချိန်အခါမလင့်ပေါ်လာတတ်သောမှားယွင်းသောဆရာများကြောင့် တိမ်ကောသည်။ (အပိုဒ် ၁၁ ) မပြောင်းလဲသူများနှင့်လဲကျသူအများတို့ကြားတွင် စည်းကမ်းတကျမရှိသောအသင်း သားများက ခရစ်တော်၏မေတ္တာ၊ အချင်းချင်းချစ်သောမေတ္တာမထားကြသဖြင့် တိမ်ကောသွား ကြပါသည်။
၃။	တတိယအချက်။ အေးတိအေးစက်ဖြစ်သောလူများစွာတို့ကား အဘယ်သူတို့ နည်း။
“များစွာ” သောသူတို့သည် မပြောင်းလဲကြပေ။ သို့မဟုတ် ပြန်၍ နောက်ပြန်လဲကြ သည်။ ခေတ်ကာလ၏ ဥပဒေမဲ့ဝိညာဉ်က ၎င်းတို့၏စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို မွှန်းထားသည်ဟူသောအချက်က သက်သေပြပါသည်။
မျိုးစေ့ကြဲသူသာဓက,က “များစွာသောသူတို့” “အေးတိအေးစက်” ဖြစ်ရသည့်အ ကြောင်းရင်းကို ရှင်းလင်းစေခဲ့သည်။ မျိုးစေ့ကြဲသူသာဓကသည် လူလေးမျိုးကို ဖော်ပြပေး ထားပါသည်။ တစ်ဖွဲ့စီက ဧဝံဂေလိတရားဟောကြားခြင်းကို အဘယ်သို့တုန့်ပြန်သည်ကို ဖော် ပြထားပါသည်။ လူလေးမျိုးလေးစားရှိကြသည်။ ပထမသုံးမျိုးမှာ စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်များမ ဟုတ်ကြပေ။ ဒေါက်တာ J. Vernon McGee က “ဤပထမလူမျိုးသုံးမျိုးသည် စစ်မှန်သောခ ရစ်ယာန်အမျိုးအစားများကို ကိုယ်စားပြုထားခြင်းလုံးဝမရှိပါ။ သူတို့သည် ယုံကြည်သူများလုံး ဝမဟုတ်ကြပါ။ သူတို့သည် နှုတ်ကပါတ်တော်ကိုကြားသဖြင့် လက်ခံသည်ဟု ဝန်ခံရုံမျှသာ ဖြစ်ပါသည်” ဟုဆိုသည်။ (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, အတွဲ ၄၊ မဿဲ ၁၃း ၂၂ မှတ်စု ) ထို့ကြောင့် စတုတ္ထမြောက်လူကသာလျှင် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သော လူစုဖြစ် ပါသည်။ ကျန်လူစုများမှာ ပျောက်ဆုံးသောသူများဖြစ်ကြပါသည်။
ဤသာဓကတွင် “မျိုးစေ့” ဟူသည်မှာ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပါတ်တော်ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါက်တာ McGee က “မျိုးစေ့ကျသောနေရာကို သတိပြုပါ။မြေဆီလွှာလေးမျိုးအကြောင်းကို ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မျိုးစေ့၏လေးပုံသုံပုံသည် ကြီးထွားခြင်းမရှိ။ သေဆုံးသွားကြ သည်။ မျိုးစေ့၏လိုအပ်ချက်မဟုတ်ပါ။ မြေဆီလွှာက ပြဿနာဖြစ်ပါသည်” ဟု ဆိုပါသည်။ လမ်းဘေးတွင်ကျသောမျိုးစေ့သည် နှုတ်ကပါတ်တော်ကိုကြားသော်လည်း မာနတ်သည် ချက် ချင်းအဝေးသို့ယူသွားသည်။ သူတို့မှာ ဘုရားကျောင်းသို့ အချိန်အနည်းငယ်လာသော်လည်း သူတို့ကို အဘယ်သို့မျှ လှုပ်ရှားစေတော်မူခြင်းမရှိကြောင်းကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ ဒုတိယလူ မျိုးမှာ ကျောက်များကြားတွင် နှုတ်ကပါတ်တော်ကြားပြီး ဆိုလိုသည်မှာ နှုတ်ကပါတ်တော်ကို လက်ခံထားသော်လည်း ပြဿနာ သို့မဟုတ် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံလာရသောအခါ ပြန်၍ လဲကျသွားပါသည်။ တတိယလူမှာ ဆူးကြားထဲတွင် ကျသောမျိုးစေ့နှင့်တူသည်။ သူတို့သည် နှုတ်ကပါတ်တော်ကိုကြားသဖြင့် ပြောင်းလဲဟန်ရှိသည်။ လုကာ ၈း ၁၄ ကို နားထောင်ကြပါစို့။
“ဆူးပင်တို့တွင်ရှိသောသူကား၊ တရားစကားကို ကြားသည်ရှိသော် လည်း၊ လောကီစိုးရိမ်ခြင်း၊ စည်းစိမ်ကြွယ်၀ခြင်း၊ ကာမဂုဏ်ခံစား ခြင်းတို့သည် နှိပ်စက်၍ အသီးမသီးသောသူကို ဆိုလိုသတည်း။” ( (လုကာ ၈း ၁၄ ) )
ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပါတ်တော်သည် “သီးတတ်သည်။ အသက်တာ၏စောင့်ရှောက်မှု၊ ကြွယ်ဝမှု၊ ပျော်ရွှင်မှုဖြင့် သီးတတ်သည်။” လုကာ ၈း ၁၄။ ဒေါက်တာ MacArthur သည် အ သွေးတော်နှင့်စပ်လျဉ်းပြီးမှားယွင်းမှုရှိသော်လည်း လုကာ ၈း ၁၄တွင်မူ မှန်ကန်ပါသည်။ သူက “စိတ်နှခွရှိသောသူတို့သည် (ယာကုပ် ၁း ၈ )ယာယီသာခံ၍ ပျက်စီးကြပါသည်။ လောကီအ ရာ၊ အပြစ်နှင့်ပြည့်နှက်သောအရာ၊ တမ်းတမှု၊ ဆန္ဒ၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ စောင့်ရှောက်မှု၊ အိမ်၊ ကား၊ စည်းစိမ်၊ ဆက်နွယ်မှု၊ ကျော်စောလိုခြင်း၊ ထိုအရာအားလုံးသည် ဧဝံဂေလိတရား၏ မျိုး စေ့ကို ဆီးတားသည်။ ရင့်ကျင့်ခြင်းအဖြစ်သို့ပို့ဆောင်သောအသီးကို မသီးကြပါ။ ဤသည်တို့ မှာ လောကီစီတ်နှလုံးသားများသာဖြစ်ပါသည်။ စိုးရိမ်ခြင်း၊ ကြွယ်၀ခြင်း၊ နှင့်ပျော်ရွှင်မှုများက ဆီးတားလျက်ရှိပါသည်” ဟုဆိုသည်။ (The MacArthur New Testament Commentary ၊ လုကာ ၈း ၁၄ မှတ်စု )
ပထမလူစားမှာ အဘယ်သို့သောလူစားဖြစ်ကြောင်းကို သိရလွယ်သည်။ “စာတန် သည် ချက်ချင်းလာ၍၊ သူတို့စိတ်နှလုံးသားထဲတွင် စိုက်ပျိုးထားသောမျိုးစေ့ကို ယူသွားပါ သည်။” (မာကု ၄း ၁၅ ) သူတို့သည် တရားဒေသနာအနည်းငယ်ကိုကြားကြသည်။ သို့သော် ထပ်၍ မတွေ့ရတော့ပါ။ ဒုတိယလူစားကိုလည်း အလွယ်တကူသိနိူင်ပါသည်။ သူတို့သည် ပြောင်းလဲဟန်ရှိသော်လည်း “သူတို့သည် စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းများကို ကြုံတွေ့လာသောအ ခါ ပြန်၍ လဲကျသွားကြသည်။” (မာကု ၄း ၁၇ )
အဘယ်သူသည် “ကျောက်ပေါများသောမြေတွင်” ကျသောလူများဖြစ်သည်ကို ပြော ရန် အချိန်ယူရပေမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခေတ်သစ်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်များတွင် (ကျွန်ုပ်တို့အ သင်းတော်အပေါအဝင်)ယုံကြည်ခြင်းကိုဝန်ခံသောသူများကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။ ရုန်းကန်မှု များနှင့်မျက်ရည်စက်များပါဝင်သည်ကို အကြိမ်များစွာထင်ရှားပါသည်။ သူတို့သည် ကလေး သူငယ်များကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ သို့မဟုတ် ဆယ်ကျော်သက်များအဖြစ်လည်းကောင်း ခရစ် တော် ဤလောကသို့ကြွလာခြင်းမတိုင်မှီ ရုန်းကန်မှုများအားဖြင့် သွားနေကြရလိမ့်မည်ကို လည်းကောင်း သင်ယူကြရမည်။ သူတို့က သူတို့သည် ခရစ်တော်ကိုအစေခံလိုသည့်စိတ်နှလုံး သစ်နှင့်ဆန္ဒသစ်များရှိသည်ဟု ပြောကြပေမည်။ သူတို့သည် ကျွန်ု္ပ်အား အကြိမ်ပေါင်းများစွာ မရူးမနှံဖြစ်နေစေကြပါသည်။ သူတို့သည် ရိုးသားသည့်သဘောကိုဆောင်ကြသည်။ သူတို့ သည် ခရစ်ယာန်ကြီးများကဲ့သို့ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းမှာ သူတို့အရွယ်ရောက်ကြသည့်အထိပင်ဖြစ် ပါသည်။ သူတို့ကို မိဘများက ငွေပေးကြသည်။ သူတို့မိဘများအိမ်တွင် အခမဲ့နေထိုင်ရန်အ တွက် အိပ်ခန်းများပေးကြသည်။ သူတို့သည် ငွေကြေးများကို အသုံးပြုကြသည်။ ထို့နောက် သူတို့သည် တက္ကသိုလ်ကျောင်းပြီးကြသည်။ အကြွေးယူလို့ရရှိလာနိူင်သည်။ သူတို့ခေါ်နေကြ အတိုင်း “လွတ်လပ်သည်” ဟုသာ ထင်မြင်ယူဆလာကြသည်။ သူတို့သက်သေခံချက်အထဲ တွင်ရှိသောအရာကို စတင်သတိပြုမိသည်ဟုသောအချက်သာဖြစ်ပါသည်။ သူတို့မိဘ သို့မ ဟုတ် သင်းအုပ်က ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိသောအရာကို လုပ်ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ယုံကြည်ခြင်း အကြောင်း အရင်က သူတို့မစဉ်းစားဖူးသောအရာဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ သူတို့သည် မှားယွင်းသော လမ်းသို့သွားသည်ကို အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များသိမြင်သည့်အရာသည် နောက်ကျပေ သည်။ သူတို့သည် အကူအညီမလိုအပ်ကြောင်း သူတို့ကို ဆီးတားသောအရာမရှိပေ။ ခရစ်တော်အတွက် သူတို့၏ စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်မေတ္တာက သူတို့အား ရုန်းထွက်စေပြီး သူတို့အား “ဤအသက်တာ၏မျှတသောအရာနှင့်အတူ (သူတို့ကိုသူတို့) ရှုတ်ထွေးစေသည်။” (၂ တိမောသေ ၂း ၄ ) သူတို့ကို အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များက လုံခြုံစိတ်ချစွာ ပြန်လည် ခေါ်ဆောင်လိုသော်လည်း သူတို့သည် အမျက်ထွက်လာကြပါသည်။ ထို့နောက် စာတန်သည် သူတို့အထဲသို့ဝင်ရောက်ပြီး တိုးတိုးလေးပြောသွားသည်မှာ “သူတို့ကုိ နားမယောင်နှင့်။ သူတို့က ဘာသိလို့လဲ။” နောက်ဆုံးတွင် သူတို့သည် မာရ်နတ်၏လက်သို့ရောက်ရှိသွားကြပါ သည်။ “ငါသည် အသင်းတော်ကိုပစ်၍မထား” ဟု သူတို့က ပြောမည်။ အသင်းတော်ကိုထား ရစ်ခဲ့ခြင်းသည် အပြစ်သာျဖစ်သည်။ သို့သော် သူတို့၏စိတ်နှလုံးသည် ခရစ်တော်ကို စွန့်ပစ်လို့ ထားလေနှင့်ပြီ။
ဩဇိသည် သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ပထမဆုံးဖော်ပြထားသည့်အချိန်တွင် ဆယ့်ခြောက် နှစ်သာရှိသေးသည်။ သူသည် ငယ်သောအရွယ်၌ “ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော်၌ ကောင်းမွန်သောအရာကို လုပ်ဆောင်ထားပါသည်။” ( ၂ ရာချုပ် ၂၆း ၄ ) ပရောဖက် ဇာခရိ သည် ၎င်း၏သင်းအုပ်ဆရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ “သူသည် ဘုရားသခင်ကို ရှာသမျှကာလပတ်လုံး ဘုရားသခင်သည် သူ့ကို ကြီးပွါးစေသည်။” ( ၂ ရာချုပ် ၂၆း ၅ ) “သူသည် အစွမ်းသတ္တိရှိလာ သည့်တိုင်အောင် ဘုရားသခင်က အံ့ဩဘွယ်ရာ ကူညီမစခဲ့သည်” ဟု ကျွန်ုပ်တို့အား ဆို သည်။ သို့သော် သူသည် ခွန်အားဗလကြီးသောအချိန်တွင် သူ၏စိတ်နှလုံးသည် ပျက်စီးခြင်း သို့ရောက်သည်။ သူ့စိတ်နှလုံးသည် မိမိဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၌ သစ္စာမဲ့လျက် ကြွားဝါ တော်မူသည်။” (၂ရာချုပ် ၂၆း ၁၆ ၊ KJV, NASV) သူသည် သန်မာသောသူဖြစ်လာသောအ ခါ သူသည် လမ်းမှားသို့ရောက်စေသည့် မာနသို့ပို့ဆောင်သည်။ သခင်ဘုရားသည် ဩဇိကို ကွဲစေပြီး “သေသည့်တိုင်အောင် နူနာစွဲလေသည်။” (၂ ရာချုပ် ၂၆း၂၁ )
ဩဇိ၏အသက်တာကို ကျွန်ုပ်တို့အတွက် သာဓကတစ်ခုအနေဖြင့် ဘုရားသခင်က ပေးထားပါသည်။ သူသည် မိမိတို့စိတ်နှလုံးထဲတွင် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပါတ်တော်ကို ဆူး တောထဲတွင် ကြီးထွားစေသောလူငယ် ယောက်ျား သို့မဟုတ် မိန်းမတို့အတွက် သာဓကပင် ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့သည် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများသာရှိသည်။ လိုအပ်သည်ထက် ငွေများစွာကို လိုအပ် ကြပါသည်။ ကင်ဆာ၊ ကိုယ်ခန္ဓာသေစေသောအရာအများဖြင့် တပ်မက်နေကြသည်။ ထို့ ကြောင့် ဤဆူးသည် တဖြည်းဖြည်းကြီးပြင်းလာပြီး ဤသူတို့၏စိတ်ဝိညာဉ်က ထိုသို့လုပ် ဆောင်ရန် အမှန်တကယ် အခွင့်ပေးတော်မူသည်။ သင့်၏မေတ္တာသည် အေးတိအေးစက်နိူင် လွန်းပါသလား။ သင်သည် လောကဆန်လွန်းပါသလား။ သင်သည် ပုန်ကန်သောသူဖြစ်ပါသ လား။ အရင်ကနေသောနေရာထက် ဆိုးသွင်းသောနေရာတွင် ရှိနေပါသလား။ လောကဆန် သောအမှုအရာမှ ရုန်းထွက်လိုက်ပါ။ ပုန်ကန်ခြင်းမှလည်း ရုန်းထွက်လိုက်ပါ။ နောက်တရပါ။ သင်သည် ခရစ်တော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိလျက်နေစဉ်တွင် အဘယ့်ကြောင့် ရှေ့ဆက်မသွားပါ သနည်း။ ပုန်ကန်ခြင်းမှရုန်းထွက်လျှင်၊ မာန်မာနမှရုန်းထွက်ရလျှင် သင့်အားရွေးနှုတ်ကယ်တင် ရန် အသေခံတော်မူသောသူ၏ခြေတော်ရင်းသို့ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပါ။
မျိုးစေ့ကြဲသူ သာဓကကိုပေးထားသည်မှာ “သင်သည် မည်သို့သောလူစုတွင်ရှိသည်ဟူသော အရာကို မိမိကိုယ်ကို စစ်ကြောရန်ပေးထားသည်။ သင်သည် ပထမသုံးစုထဲတွင် ပါဝင်လျှင် ပြောင်းလဲဖို့ အမှန်တကယ်လိုအပ်ပါသည်။” သို့မဟုတ် အနည်းဆုံး “အဘယ်သို့ကြား၍ လက် ခံသည်၊ ဆုတ်ကိုင်သည်၊ အစာရှောင်သည်၊ နောင်တရသည်ကို ပြန်၍ သတိရပါ။” ( ဗျာဒိတ် ၃း ၃ ) သင်သည် “ဆူးပင်များဝိုင်းထားသောမြေပြင်” မဖြစ်မှီ ခရစ်တော်ထံသို့ မိမိအသက်တာ ကို ပြန်လည်အပ်နှံပြီး နောင်တရပါ။ (William Hendriksen, Th.D., ရှင်လုကာ ခရစ်ဝင် ကျမ်း၊ Baker Book House, ၁၉၇၈၊ စာ- ၄၂၉၊ လုကာ ၈း ၁၄ မှတ်စု )
သင်က “အို ဘုရားသခင်၊ မာန်မာန၊ နှင့်ပုန်ကန်ခြင်းမှ ကိုယ်တော့်ထံပြန်လာပါ၏။ အိုဘုရားသခင် ခရစ်တော်၏အသွေးတော်အားဖြင့် အကျွန်ုပ်ကိုဆေးကြောပေးပါ” ဟု ဆိုသင့် ပါသည်။ “အိုဘုရားသခင်၊ စိတ်နှလုံးသစ်ကို ဖန်တီးပေးပါ။” (ဆာလံ ၅၁း ၁၀ )
သင်တို့၏သီချင်းစာရွက်ထဲက နံပါတ် ၄ ကို အားလုံးမတ်တပ်ရပ်ပြီး သီဆိုကျူးဧကြပါ စို့။
“သင့်စိတ်နှလုံးပေးပါ၊ ” ဘုရားသခင်အားဆိုလော့၊
သူသည် တိုးတိုးလေးစကားဆို၊ ရှိတော်မူရာအရပ်တွင်
“ကိုးစားယုံကြည်ပါ၊ သင့်စိတ်နှလုံး ကျွန်ုပ်အားပေးပါ။”
ရှိရာအရပ်က တိုးတိုးစကားကို နားညောင်းပါ။
“သင့်စိတ်နှလုံးအားပေးပါ၊ ” ကယ်တင်သောအရှင်အားဆိုလော့။
သနားခြင်းကရုဏာအားဖြင့် ထပ်ခါထပ်ခါ ခေါ်လော့။
“အပြစ်မှ ယခုရုန်းထွက်ပါ၊ မကောင်းမှုမှ ရုန်းထွက်ပါ၊
သင့်အတွက် ငါအသေခံသည်မဟုတ်လော့၊ သင့်စိတ်နှလုံးကိုပေးပါ။”
(“သင့်စိတ်နှလုံးကိုပေးပါ၊” Eliza E. Hewitt ၁၈၅၁- ၁၉၂၀ )
သင်သည် ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသေးလျှင် သင့်အပြစ်ထဲကနောင်တရပြီး ယေရှုကို ကိုးစားပါ။ သူသည် သင့်အပြစ်အတွက်ပေးဆပ်ရန် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် သေခံတော်မူသည်။ သင့်အား ထာဝရအသက်ကိုပေးရန် သေခြင်းမှ ထမြောက်တော်မူခဲ့သည်။ သင်သည် သူ့ကို ယုံကြည်ကိုးစားပြီး သူ့အတွက် အသက်ရှင်ရန် ဆုတောင်းပါ၏။ အာမင်။
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ ကျမ်းစာဖတ်ကြားခြင်းကို မစ္စတာ Abel Prudhomme က ဆောင်ရွက်ပါသည်။ မာကု ၄း ၁၃- ၂၀
"ကျွန်ုပ်အသက်ကိုယူပါ။ ရှိပါစေ၊"၊ (Frances R. Havergal, ၁၈၃၆-၁၈၇၉) ရေးစပ်သည်။
“မတရားသောအမှုသည်များပြားသဖြင့်၊ အများသောသူတို့၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ခေါင်းပါးလိမ့်မည်။” (မဿဲ ၂၄း ၁၂ ))
( ၂ တိ ၃း ၁- ၅ ) )
၁။ ပထမအချက်။ ဤအရာများဖြစ်လာမည်ဟု မည်သည့်အချိန်၌ ခရစ်တော် မိန့်တော်မူခဲ့သနည်း။ မဿဲ ၂၄း ၃ ၊
၂။ ဒုတိယအချက်။ ဤသို့ဖြစ်လာမည်အကြောင်း ယေရှုက အဘယ့် ကြောင့် မိန့်မူ ခဲ့သနည်း။ မဿဲ ၂၄း ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂ ။
၃။ တတိယအချက်။ အေးတိအေးစက်ဖြစ်သောလူများစွာတို့ကား အဘယ် သူတို့ နည်း။ လုကာ ၈း ၁၄၊ ယာကုပ် ၁း ၈၊ မာကု ၄း ၁၅၊ ၁၇၊ ၂ တိ ၂း ၄၊ ၂ရာချုပ် ၂၆း ၄၊ ၅၊ ၁၆၊ ၂၁၊ ဆာလံ ၅၁း ၁၀၊ ဗျာဒိတ် ၃း ၃။